HTC သည်၎င်း၏ Android ထုတ်ကုန်အားလုံးတွင် LogMeIn Rescue ကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည် Androidsis
သင့်ကွန်ပျူတာနှင့်အဝေးမှချိတ်ဆက်သူအားလုံးအတွက်ဒီနေ့ကျွန်ုပ်အသုံး ၀ င်သောအသုံးအဆောင်တစ်ခုအကြောင်းပြောပါမည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါကရှာဖွေတွေ့ရှိကတည်းကငါအသုံးပြုခဲ့သည်, စမတ်ဖုန်းပေါ်မှာငါကတက်ဘလက်ပေါ်မှာထက်အတန်ငယ်ပိုပြီးမသက်မသာသည်ဝန်ခံဖို့ရှိသည်, ဒါပေမယ့်သူကသင်တို့ကိုဒုက္ခထဲကနေနိုင်ပါတယ်။ LogMeIn Inc. သည်နည်းပညာအထောက်အပံ့နှင့်အဝေးမှဆက်သွယ်နိုင်ရန် application တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
HTC သည် LogMeIn Rescue ကို၎င်း၏ Android စမတ်ဖုန်းများသို့မဟုတ်တက်ဘလက်အားလုံးတွင်ထည့်သွင်းလိုသည်၎င်းသည် HTC နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုပြီးစနစ်တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးသည်နှင့်နည်းပညာပြserviceနာရှိပါကအဝေးမှ ချိတ်ဆက်၍ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ကိရိယာကိုရယူနိုင်လိမ့်မည်။
ထိုအရက်အနည်းငယ်အကြာကဖြစ်ခဲ့သည် Verizon က ၎င်း၏၏နောက်ဆုံးပေါ် update ကိုအတွက်ကြေညာခဲ့သည် LG ကတော်လှန်ရေး သင်၏ကိရိယာတွင်ထည့်သွင်းရန်အဝေးထိန်းနည်းပညာဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့ LogMeIn ပေါ်လစီအရ၎င်းသည်ရောဂါရှာဖွေရေးအတွက်ကိရိယာကိုသာဆက်သွယ်လိမ့်မည်ဟုဖော်ပြထားသည် နှင့်ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
လောလောဆယ်လျှောက်လွှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသန်းပေါင်း ၁၅၀ ကျော်တွင်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်, PCs, Macs အပါအဝင် စမတ်ဖုန်းများ, တက်ဘလက်.
LogMeIn Inc. သည်မိုဘိုင်းဖုန်းထုတ်လုပ်သူ HTC ကုမ္ပဏီနှင့်သဘောတူညီမှုရပြီးဖြစ်သည်။ သူတို့၏ပစ္စည်းများတွင်အဝေးမှဆော့ဖ်ဝဲအထောက်အပံ့ပါဝင်သည်။ LogMeIn ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် HTC သုံးစွဲသူများအားအခမဲ့ပံ့ပိုးမှုပေးခြင်း။ - Woburn, Mass.
အခြေခံပြoptionsနာအချို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းမှအပကျွန်ုပ်သည်ပြremနာတစ်ခုကိုအဝေးမှမည်ကဲ့သို့ဖြေရှင်းနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ WiFi၊ Bluetooth ချိတ်ဆက်မှုစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ငါအများကြီးဖုံးလွှမ်းနိုင်တယ်လို့မထင်ပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖုန်းပိတ်ထားခြင်း၊ ဖုန်းမဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်အလုပ်မလုပ်တဲ့အခါပြproblemsနာအများစုဟာပြresနာအများစုကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကနည်းနည်းပဲအသုံးဝင်သည်။ ဒါပေမယ့်အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ Android သုံးစွဲသူအများစုကသူတို့ဘာသာသူတို့မတတ်နိုင်တဲ့ပြproblemsနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်ကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်။
ရင်းမြစ် - LogMeIn
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - LogMeIn စက်နှိုးခြင်း၊ သင်၏ Android စက်မှသင်၏ကွန်ပျူတာကိုအဝေးမှကြည့်ရှုပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC သည်၎င်း၏ Android ထုတ်ကုန်အားလုံးတွင် LogMeIn Rescue ပါ ၀ င်မည်
စီးပွားရေးမကောင်းပါ။ သူလျှိုအန္တရာယ်ကင်းပါသည်။ သူတို့သည်သင်၏ android ကိုအဝေးမှ deconfigure နှင့်စစ်ဆေးနိုင်သော်လည်းမည်သူဖြစ်မည်နည်း ???
Dude Perfect: ဘတ်စကက်ဘောကစားခြင်းတွင်မဖြစ်နိုင်သည့် caroms များကိုဖန်တီးပါ